यसरी भत्काइँदैछ अछाममा धमाधम छाउपडी गोठ (तस्बीरसहित) « Deshko News
यसरी भत्काइँदैछ अछाममा धमाधम छाउपडी गोठ (तस्बीरसहित)
अछाम, पुस ११
समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत अछाममा छाउपडी गोठ भत्काउने अभियान सुरु गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछाम मातहतका ईलाका प्रहरी कार्यालयसंग समन्वय गरेर जनप्रतिनिधीहरुले छाउपडी गोठ भत्काउने अभियान सुरु गरेको हो ।
यसअन्तर्गत विहीबार एकै दिन ६९ वटा छाउपडी गोठ भत्काइएका छन् । जसमा इलाका प्रहरी कार्यालय बयलपाटासंग समन्वय गरेर साँफेबगर नगरपालिका वडा नं. ७ रिडिकोटमा वडा अध्यक्ष मिठ्ठु सिंह भाटको संयोजकत्वको टोलीले ९ वटा छाउपडी गोठ भत्काएको छ ।
यस्तै, ईलाका प्रहरी कार्यालय घुघुरकोटसंग समन्वय गरेर साँफेबगर नगरपालिका वडा नं. १३ का वडा अध्यक्ष सागरसिंह सुनारको संयोजकत्वको टोलीले बाब्लामा १० वटा छाउपडी गोठ भत्काएको छ । यसैगरि साँफेबगर नगरपालिकाकै वडा नम्बर २ को पिपलतोला र श्रीकोटमा प्रहरी चौकी बैद्यनाथसंग समन्वय गरेर वडा सदस्य तुलाराम भुलको टोलीले ३६ वटा छाउपडी गोठ भत्काएको छ ।
यस्तै, पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका वडा नम्बर ८ मा पनि वडा सदस्य लालबहादुर शाहीको टोलीले अस्थाई प्रहरी पोष्ट बारलासंग समन्वय गरेर चुहानेपानी, सर्फा र कुमालीमा १४ वटा छाउपडी गोठ भत्काएको छ ।
समुदाय प्रहरी साझेदारी वडा समितिका पदाधिकारीहरु, स्थानीय समाजसेबी महिला बुद्धिजिबी,आमा समूह, स्वास्थ्यकर्मी लगायतको सहभागितामा छाउपडी गोठहरु भत्काइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामले जनाएको छ । छाउपडी गोठहरु भत्काउनुका साथै छाउपढी प्रथा अन्त्यका लागि जनचेतनामुलक कार्यक्रम गरिएको छ ।